यी कलाका हस्ती ‘भ्यालेन्टाइन-डे’ नजिकिँदै गर्दा हुरुक्कै ! (भिडियोसहित) | Screennepal
यी कलाका हस्ती ‘भ्यालेन्टाइन-डे’ नजिकिँदै गर्दा हुरुक्कै ! (भिडियोसहित)
२०७६, १९ माघ आईतवार ०६:४२screennepalExclusive, Music0
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका ‘मेगास्टार’ राजेशपायल राईको नयाँ गीत तथा भिडियो सार्वजनिक भएको छ । शनिबार राजधानीमा एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको ‘हुरुक्कै भए म’ बोल गीतको भिडियोमा नेपाली फिल्मका लोकप्रिय अभिनेता दयाहाङ राई र चर्चित मोडल एलिशा राईले अभिनय गरेका छन् ।
Previous Post‘नीरफूल’को फस्र्टलुक सार्वजनिक, फिल्म ३० फागुनमा Next Postसीता र सन्चमानको ‘आखेन नुमा’ (भिडियो)